Tilmaamaha alaabta: 440 / 440C kubbadda birta ah ee birta ah ayaa leh adkaansho sare, iska caabin miridh wanaagsan, xirashada iska caabin, magnetism. Waxay noqon kartaa baakado saliid leh ama qalalan.
Meelaha arjiga:440 kubadaha birta ahama waxaa badanaa loo isticmaalaa wershadaha leh shuruudaha sare ee saxsanaanta, adkeynta, iyo ka hortagga miridhku, sida xawaaraha sare iyo sawaxanka hoose ee biraha birta ah, matoorrada, qaybaha aerospace, qalabka saxda ah, qalabka otomaatiga, filtarka, iwm. ;
Tilmaamaha alaabta: 420 kubbada birta ahama waxay leedahay adkaansho sare, iska caabin miridh wanaagsan, xirashada iska caabin, magnetism iyo qiimo jaban. Waxay noqon kartaa baakado saliid leh ama qalalan.
Meelaha arjiga:420 kubadaha birta ah ee birta ah ayaa badanaa loo isticmaalaa alaabada u baahan saxnaanta, adkaanta iyo ka hortagga miridhku, sida saa'idka birta ah ee birta lagu dhejiyo, isdhaafsyada jilitaanka, caagagga balaastigga ah, qalabka batroolka, fureyaasha, iwm.
Tilmaamaha alaabta: 304 waa kubbadaha birta ah ee austenitic-ga ah, oo leh adkaansho hoose, miridhku wanaagsan yahay iyo caabbinta daxalka; Saliid la'aan, baakado qallalan;
Meelaha arjiga: 304 kubbadaha birta ah ee birta ah waa kubbado bir ah oo u dhigma cuntada oo aad ayaa loo isticmaalaa. Badanaa waxaa loo isticmaalaa shiidida cuntada, qalabka qurxinta, qalabka qalabka caafimaadka, qalabka korontada, qalabka mashiinka dharka lagu dhaqo, qalabka dhalada ilmaha, iwm.;
Kubadaha la qoday / kubbadaha dunta / Kubbadaha feedhka / Kubbadaha la taabto
Waxyaabaha: aisi1010 / aisi1015 / Q235 / Q195 / 304/316;
Waan ka shaqeyn karnaa oo aan u habeyn karnaa kubbadaha kala duwan ee daloolka iyo kubbadaha godadka nuska ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha ama sawirada
Kubadaha feedhka ayaa leh qaababka soo socda:
1. Dalool indho la ': taas oo ah, gelid la'aan, kalabar dalool ama qoto dheer gaar ahaan shuruudaha macaamiisha. Furitaanku wuxuu ahaan karaa mid weyn ama yar.
2. Iyada oo loo marayo daloolka: taas oo ah, feer dhex mar, dhexroorka daloolka wuxuu noqon karaa mid weyn ama yar.
3. Taabashada: Taabashada dunta, M3 / M4 / M5 / M6 / M7 / M8, iwm.
4. Chamfering: Waxaa lagu qasi karaa hal dhinac ama labada dhinacba si ay u noqoto mid siman oo siman oo aan lahayn nabarro.
Nidaamka soosaarka: cadaadiska isostatic, cadaadiska hawada oo qulqulaya;
Midabka: madow ama cawl;
Cufnaanta: 3.2-3.3g / cm3;
Fasalka saxda ah: G5-G1000;
Cabirka ugu weyn: 1.5mm-100mm;
Si3N4 kubbadaha dhoobada ah waa dhoobada saxda ah ee lagu kala gooyay heerkulka sare ee jawiga aan oksijiinta lahayn. Marka laga reebo hydrofluoric acid, kuma falceliso asiidhyada kale ee aan dabiici ahayn.
Tilmaamaha alaabta: Kubadaha naxaasta ah badanaa waxay isticmaalaan H62 / 65 naxaas ah, oo badanaa loo isticmaalo qalabka korantada ee kala duwan, shidmooyinka, nadiifinta, iyo tabinta.
Kubadda naxaasta ahi waxay leedahay awood aad u wanaagsan oo ka hortagga miridhku oo keliya biyaha, baatroolka, batroolka, laakiin sidoo kale benzene, butane, methyl acetone, ethyl chloride iyo kiimikooyin kale.
Meelaha arjiga: Badanaa waxaa loo isticmaalaa filtarka, buufiyeyaasha, aaladaha, aaladaha cadaadiska, mitirka biyaha, carburetor, qalabka korontada, iwm.
Kubadaha birta AISI1015
Tilmaamaha alaabta: Kubadaha birta ee kaarboonku waa kuwo qiimo jaban oo si ballaaran loo isticmaalo. Marka la barbardhigo kubbadaha birta ah ee xambaarsan, kubbadaha birta kaarboon ka yar ayaa leh adkaansho yar waxayna xirtaan iska caabin ka tan dambe ah, waxayna leeyihiin nolol ka gaaban;
Meelaha arjiga:Kubadaha birta kaarboon badanaa waxaa loo isticmaalaa qalabka qalabka, alxanka ama miisaanka miisaanka, sida hangers, casters, slides, bearings fudud, qalabka toy, qalabka elektarooniga ah, farsamada gacanta, armaajo, qalabka yaryar, iwm.; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo ama lagu shiido dhexdhexaad;
Muuqaalka alaabtas: sita kubadaha birta waxay leeyihiin adkaansho sare, saxnaan sare, xirashada iska caabin iyo nolol adeeg dheer;
Baakadaha saliida leh, birta birta ah, birlabta;
1. Kubadaha birta ee saxan-saxnaanta sare waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa shirarka aamusnaanta xawaaraha sare leh, qaybaha gawaarida, qeybaha mootooyinka, qeybaha baaskiilka, qeybaha qalabka, iskeysyada khaanadaha, biraha hagaha, kubadaha guud, warshadaha elektarooniga, iwm.;
2.Kubadaha birta qaada ee saxan-hooseeya waxaa loo isticmaali karaa sida loo shiido oo loo nadiifiyo warbaahinta;
magaca sayniska dhalada lime galaas kubad adag. Maaddada ugu weyn waa sodium kaalsiyam. Waxa kale oo loo yaqaanaa kubbadda lime ee kubbada-soodhada ah.
Cufnaanta muraayadda lime ee soodhaha: qiyaastii 2.4g / cm³;
1.Waxyaabaha kiimikada ah: Kuleylka adag ee kuleylka adag waxay leeyihiin astaamo kiimiko oo xasilan, awood sare, xirasho hoose, iska caabin daal, u adkeysiga daxalka iyo waxyaabo kale oo aad u fiican
2.U adeegso:Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa rinjiyeyaasha, gashiga, midabbada, sunta cayayaanka, cinjirka iyo warshadaha kale. Waxay ku habboon tahay nadiifinta iyo nadiifinta biraha waaweyn iyo kuwa yaryar, balaastigga, dahabka iyo dahabka dahabka, dheeman iyo walxo kale. Kaliya maahan inay soo celiso jilicsanaanta walxaha la farsameeyay, laakiin waxay kaloo xoojisaa saxnaanta xoogga iyo saameynta midabka gaarka ah ee walxaha laftooda, luminta walxaha aad bey u yartahay. Waxyaabaha ugu habboon ee leh saameyn gaar ah daaweynta dusha sare ee alaabooyin kala duwan iyo macdano qaali ah. Sidoo kale waa shey loo baahan yahay inuu ku jiro shaqada wax shiida iyo baalashleyda. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa shaabad ahaan, iwm.